Mampifanolana an’i Etazonia sy Bolivia ny ravina kôka tsakoina · Global Voices teny Malagasy
Mampifanolana an'i Etazonia sy Bolivia ny ravina kôka tsakoina
Voadika ny 06 Avrily 2011 7:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Aymara, English
Mitana ny laharana fahatelo maneran-tany i Bolivia raha ny resaka famokarana kôka no jerena araka ny tatitra momba ny zavamahadomelina navoakan'ny firenena mikambana tamin'ny taona 2010, kanefa tsy avy hatrany dia nitodika tamin'i Bolivia ireo mpiasa ao amin'ny DEA (Sampana miady amin'ny fanondranana sy fidorohana zavamahadomelina any Etazonia). Fanazavana. The Latin Americanist mibilaogy:
Tamin'ny 2008, noroahan'ny filoha Morales ny DEA taorian'ny nahafantarany fa mitsikombakomba manohitra azy ny masoivohon'i Etazonia. Vao haingana, nifanolana ny fanjakana Amerikana sy Boliviana taorian'ny fanentanana nataon'i Morales hanohitra ny tsy fahazoana mitsako ravina kôka.
Ny filohan'i Bolivia, Evo Morales, mpamboly kôka nikoizana talohan'ny naha filoham-pirenena azy sady mpiaro tsy nisy fepetra ity seha-pambolena ity izay azo tsakoina koa ny raviny.
Fivarotana kôka any Bolivia. Saripika mpisera Flickr orianomada (CC BY-NC-SA 2.0)
Ny ravina kôka tsakoina dia zavamahadomelina maivana mampatanjaka, ampiasaina hitsaboana aretina azo avy any an-tendrombohitra (faritra avo). Ny fampiasana ny ravina kôka tsakoina na atao dite dia fanao mahazatra nentin-drazana any amin'ny faritr'i Andes. Voka-pianarana iray (tsy mahazo avoaka ity vokam-pianarana ity, kanefa misy ampahany afaka jerena ao amin'ny tranokalan'ny Transnational Institute) navoakan'ny OMS (Sampan-draharahan'ny firenena mikambana momba ny fahasalamana) no mamehy fa tsy misy voka-dratsy ateraky ny fitsakoana ravina kôka; ny mifanohitra amin'izany aza, hitan'ireo mponina mipetraka any Andes fa misy voka-tsoa ny ravina kôka noho izy manasitrana, masina ary afaka ampiasan'ny daholobe. . Blogging by boz mamehy:
Tsy misy antony tokony handrarana ny fitsakoana ravina kôka, ny dite kôka na ny fitaterana azy. Tsy manampy velively amin'ny ady atao amin'ny fanondranana zavamahadomelina eran'ny kaontinanta ny fandrarana ny ravina kôka. Tsy miteraka olana ara-pahasalamana ho an'ny daholobe ny fitsakoana azy fa mila atao manara-dalàna fotsiny izany.
Taorian'ny fitsidihana nataon'ny vaomiera mpanao famotorana an'ny firenena mikambana mikasika ny ravina kôka any Bolivia sy Pero (tamin'ny 1949), dia nandrara ny fitsakoana ravina kôka tato anatin'ny 25 taona nanomboka hatreo amin'ny fotoana nampiharana ny fifanarahana ny Lalàna Iombonana ry zareo. Mbola mandà izany fandrarana nataon'ny firenena mikambana izany anefa i Bolivia.
Manao ezaka lehibe i Etazonia hampikatsoana ny fangatahan'i Bolivia, ary milaza ny sazy ampiharina araka ny lalàna izay manondro fa tsy misy ny fiaraha-miasa niarahana tamin'i Bolivia amin'ny ady atao amin'ny fanondranana zavamahadomelina. Nidina an-dalambe ny Boliviana, nikarakara “tsako-anaty” (kilalaon-teny mifandraika amin'ny fitokonana – jereo ny sarimiaina ao amin'ny tranokala Andean Information Netowork – Filazambaovao any Andes), hanohanana ny fanentanana nataon'ny fanjakana any an-toerana momba ny lalàna fandrarana. Hemispheric Brief manampy:
Cocalero sy ny mpitarika ny antoko MAS Leonilda Zurita manamafy fa tsy mifanaraka amin'ny tian'ny ankamaroan'ny firenena hafa ny zavatra ataon'i Etazonia. Nanambara tamin'ny AFP izy “Manohana anay ny firenena rehetra, toy ny nofoanana ny sazinay (fitsakoana kôka), firenena tokana no mitsivalana amin'izany dia i Etazonia”.
Ny tena mahamaika dia ny fomba hampihenana ny fatran'ny zavamahadomelina miditra antsokosoko any Etazonia, sy ny fandrarana ny fitsakoana ravina kôka izay mitana anjara toerana amin'izany. Mampirisika an'i Meksika hanaraka ny “drafitra Kolombia” ny solontena amerikana, tohanan'i Etazonia, mba ho fitaratra amin'ny ady atao amin'ny zavamahadomelina, na dia eo aza ny kiana isankarazanay izay milaza fa tsy mahomby izany. Ny tetikady nandravana ny fifanarahana mba hanafoanana ny fanondranana no nanokatra ny làlana ho an'ny andian'olona madinika izay sarotra ny manenjika azy sy manara-maso azy ary ny miditra ao anatiny. Ahitana izany koa any Bolivia. Stephen N. DeWitt mizara ny traikefany ao ami'nny bilaogy A Franciscan Abroad :
Nandritra ny fotoana nijanonako tany, dia nitsidika faritra iray anisan'ny tena mpamokatra kôka any Bolivia ny sekoly fianarana tenim-pirenena nisy ahy ary niresaka tamin'n ypolisy tany an-toerana izahay. Nolazain'izy ireo taminay fa ny ankamaroan'ny asa fanondranana zavamahadomelina any an-toerana dia raharaham-pianakaviana. Fianakaviana vitsivitsy no manodina kôka kely mbola tsy voahodina ka manondrana azy ireny mankany Kôlombia sy any amin'ny firenena hafa ka any indray izy ireny no avadika ho lasa kôkaina. Mampiasa fitaovana mora entin-tanana ireny fianakaviana ireny ka azony entina na ariana izany rehefa tratra ry zareo. Tsy ho vita mihitsy ny hampihena ny isan'izy ireo : rehefa tratra ny fianakaviana iray dia am-polony hafa no manohy ny asany.
Mampiahiahy ny ezaka ataon'i Etazonia hanakanana ny làlana angatahan'i Bolivia. –Blogging by boz manoratra:
Raha tokony hametraka paikady tsotra mikasika ity olana ity sy hamela an'i Bolivia hanatanteraka ny lalàna nangatahany, dia naleon'i Obama sy ny fanjakany mandany andro amin'ny politika hiarovana paikady tsy mahomby sady tsy mafy orina efa natao 50 taona lasa izay.
Ny fanomezana alàlana hitsako ravina kôka dia midika fanekena ny fambolena any an-toerana sy fanekena ny zon'ny tompon-tany. Kanefa amin'izany, mifandona amin'ny zavatra hafa oindray ilay lalàna, tahaka ny ady atao amin'ny fanondranana zavamahadomelina izay andefasana ity fomba fanao ity. Samy miziriziry amin'ny heviny na i Etazonia na i Bolivia mikasika ity olana ity. Ny fandinihana ny foto-kevitra aroson'ny roa tonta ihany no mety hahitana marimaritra iraisana azo ekena.
2 andro izayKanadà